အမေ့ဘက်က ရှေ့နေလိုက်မယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အမေ့ဘက်က ရှေ့နေလိုက်မယ်…
Posted by johnnydeer on Jun 4, 2013 in Copy/Paste |9comments
ဖွတဲ့မေးခွန်း…ဆွတဲ့မေးခွန်း…ယူဆချင်သလို ယူဆလို့ ရတဲ့မေးခွန်းတွေ ဇွတ်လိုက်မေးမယ်…
ဖြေတဲ့အဖြေထဲကနေ လိုချင်တဲ့ အပိုင်းလေးပဲ ဖြတ်ယူမယ်…
အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကို တခြားအနက်ထွက်အောင် ဟိုထင်ဒီထင် ဖြစ်စေမယ့် အရေးအသားနဲ့ ရေးကြမယ်…
ပြီးတော့ ကိုယ့်အမေကိုယ့်အဖွားလောက်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး…လင်ရောသားတွေရော ပစ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ဘ၀ကြီး ပုံအပ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး…မြန်မာပြည်အတွက် သူ့အပြင် တခြားတစ်ယောက်မရှိနိုင်တော့တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး…ကို ၀ိုင်းပြီးရစရာမရှိအောင် ပြောကြမယ်…
တခွန်းထဲ ပြောလိုက်မယ်…ဒီလို လူတွေကို စောက်ရမ်းရွံတယ်…
2015 မှာ ကျွန်မ သမ္မတ ဖြစ်ချင်ပါတယ်….သမ္မတဖြစ်မှ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ရမယ်…လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှ တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်လုပ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးကို လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ…ဒီ့အတွက် ကျွန်မ သမ္မတ ဖြစ်ချင်ပါတယ်…
ဒီလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြေထားပါတယ်….ပြန်ရေးကြတော့ ဘယ်လို ပြန်ရေးကြသလဲ….
….2015 မှာ ကျွန်မ သမ္မတ ဖြစ်ချင်ပါတယ်….
ဓာတ်ပုံကြီးနဲ့ စာလုံးအမဲကြီးနဲ့ တွဲပြီး ဒီလို ဖြတ်ရေးကြတယ်…အာဏာ ရူးတယ်…အရှက်မရှိဘူး…စသဖြင့် ၀ိုင်း ဘေကြတယ်…
တခြားအနက်ထွက်စေသော…တခြားအနက်သက်ရောက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရေးသားသော…ထိုသို့သော စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်များကိုလဲ ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချကန့်ကွက်ပါတယ်…
အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ အမြင်…ရှုထောင့် ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ဘာသာမတူ…လူမျိုးမတူ…အဲ့ဒါ တို့ရန်သူပဲ…နှိပ်ပစ်…တွယ်ပစ်..သမပစ်…ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်…ပြောချင်ရာပြောလို့ရတယ်…
အခုဟာက နိုဘယ်ဆုရှင်…နိုဘယ်ဆုတောင် ရိုးရိုးဆုမဟုတ်ဘူး…ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု…
ပြောတဲ့စကား…ကြည့်တဲ့အမြင်ဟာ အမျိုးသားရေးဆိုတာထက် လူသားဖြစ်တည်မှုဆိုတာကို ပိုအလေးပေး ပိုဦးတည်ပြီး ပြောရမယ်…ပြောလည်းပြောနေတယ်…ဒါပေမယ့် သူ့ရင်ထဲမှာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်က ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ထက် အဆ ရာထောင် ပိုပါတယ်…
တောင်အောက်က ကြည့်တဲ့အမြင်နဲ့ တောင်ပေါ်က ကြည့်တဲ့အမြင် ဘယ်လိုမှ တူစရာမရှိပါဘူး…တောင်ပေါ်ကကြည့်တဲ့သူက အရှေ့က အန္တရယ်တွေမြင်လို့ ကွေ့ဝိုက် လျှောက်ဖို့ ပြောပြနေတာပါ…တောင်အောက်ကနေ ဘာမှမသိ…ဘာမှမမြင်ပဲ ဒီလမ်းမှ ဒီလမ်း…ပြောင်းမလျှောက်နိုင်ဘူး…ဆိုပြီး ငါ တကော ကောမနေကြပါနဲ့…
ငါတကောကောသမားတို့ရေ…သူက ခင်ဗျားတို့ထက်အများကြီး တော်တယ်…ခင်ဗျားတို့ထက် အများကြီး တတ်တယ်…ခင်ဗျားတို့ထက်အများကြီး အမြင်ကျယ်တယ်…
မျက်တောင်တဖျားလေးကြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး…မျက်စိတဆုံး ကြည့်ပြောနေတာပါ…ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး နားလည်ပေးလိုက်ပါ…
ကျွန်မတော့ အမြဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။
ဘယ်သူ Perfect ဖြစ်သူမရှိပါဘူး။
ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာလဲ အားနည်းချက်တွေ ရှိမှာထားပါ။
ဒါပေမဲ့ အားသာချက်တွေ မှာ ဘယ်သူက လာ ပြိုင်နိုင်သလဲ။
သူ့လို တိုင်းပြည် ကို စိတ်စေတနာ အပြည့်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးမပါ ဘဲ အလုပ်လုပ်နေသူ ရှာတွေ့နိုင်လား။
ရှိရင်လဲ အဲဒီသူတွေ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အား လိုအပ်ကြောင်းသိသမို့ တွဲပြီး လုပ်မဲ့ သူတွေချည်းဖြစ်မှာ အသေအချာဘဲ။
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အပြစ်ပြော သူတွေ ကတော့ သူတို့ ကလဲ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ အရည်အချင်းလဲ မရှိရှာကြ၊
နောက်လိုက်ကောင်းလဲ ဖြစ်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒမရှိ။
ဟိုကြည့်လိုက် ဒီပြောလိုက်နဲ့ အလုပ်ကောင်းကောင်း ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိသူတွေ။
ကြာတော့ ဒီလို လူတွေ ကို သနားတောင် လာမိတယ်။
ငြိမ်ငြိမ်လေးသာ ထိုင်ကြည့်နေပါ ….ဆိုတာယုံလောက်တောင် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျာ…
johnnydeer ရေ မြူတွေဆိုင်းတဲ့ကြားကဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မီးခိုးတွေလွှမ်းနေတဲ့ကြားကဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ သဲသဲမဲမဲရွာနေတဲ့ မိုးထဲကဘဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ကြတဲ့အခါ အမြင်မကြည်တတ်ပါ။
အကြည့်ခံရတဲ့သူက ၀ါးနေလို့မဟုတ်ဘူးနော် ကြည့်တဲ့သူက မကြည်လင်တဲ့နေရာက ကြည့်မိလို့ပါ။ ဒါဆို မြင်အောင် ကြည့်တတ်ကြပါစေလို့ဘဲ ပြောလိုက်မယ်ဗျာ။
တကယ်တော့ ဖြစ်ရမှာက ဒေါ်စုသမ္မတဖြစ်ချင်စိတ်ပေါ်အောင် ၀ိုင်းဆုတောင်းရမှာ
သမ္မတ မဖြစ်ချင်မှာကို စိုးရိမ်ရမှာ…။
ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်က ဒီလိုပြောတော့ ကျုပ်ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာမိတာ ၂ ချက်ရှိတယ်..။
၁- သူသမ္မတဖြစ်ချင်စိတ်ရှိတာ အင်မတန်ဝမ်းသာတယ်
၂- ရဲရင့်ပြတ်သားပြီး ရိုးသားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၊ ဟန်ဆောင်ပြီး ပဲမပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရပြီဆိုပြီး ၀မ်းသာတယ်။
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ပန်းခင်းကြီးလိုပြင်ထားတယ်
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ထမင်းဝိုင်းကြီးလိုပြင်ထားတယ်
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ခြေသုတ်ပုဆိုး မြွေအစွယ်ကျိုးလို့လည်းပြင်ထားတယ်။
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ စာအုပ်စင်ကြီးလိုပြင်ထားတယ်
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ကြယ်တာရာ ညီလာခံကြီးလိုပြင်ထားတယ်
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ စက်ဝိုင်းတစ်ခုအလယ်မှာ
ဓါးပေါက်ခံဖို့ရပ်နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လိုလည်း ပြင်ထားတယ်။
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ မြေမြုပ်မိုင်းတွေမွှစာကျဲနေတဲ့အရပ်မှာပေါက်နေတဲ့
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ နေ့နဲ့ညမှားအိပ်နေရတဲ့ မီးပြတိုက်တစ်ခုလိုလည်းကျင့်ထားတယ်။
ကျွန်မ မြားရဲ့နောက်မြီးအဖျားမှာ ဟုန်းဟုန်းတောက် လောင်နေပါစေ
ကျွန်မရဲ့ ဦးတည်ချက်ပစ်မှတ်ဟာ ဘယ်တော့မှမလွဲ
ဂြိုဟ်တုတစ်စင်းနောက်မှာ ပန်းထွက်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့မီးစတွေလိုအဲ့ဒါဟာ ကျွန်မကိုပိုပြီးခွန်အားဖြစ်စေခဲ့။
ကလေးတွေ စပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့ စာမျက်နှာဟာ
အချစ် သို့မဟုတ် ကမ္ဘာကြီး သို့မဟုတ်
ရှေ့က ချိုင့်ခွက်ထူ လူသွားလမ်းလေးကို ကျောင်းဆင်းရင်ပြင်ကြစို့ဒါနဲ့ စမယ်။
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ မာသာထရီဇာလိုပြင်ထားပြီး ဒိုင်ယာနာမင်းသမီးလိုလည်းဆင်ထားတယ်။
သူတို့ ဘာကြောင့် ယဉ်ကျေးကြသလဲ
သေနတ်တွေ ဗုံးတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြားထဲကတောင် သူတို့
ဘာလို့အင်္ဂါဂြိုဟ်သွား လက်မှတ်တွေ အလုအယက် ၀ယ်နေကြတာလဲ။
ကျွန်မတို့ အိမ်အတွက် လိုတိုး ပိုလျှော့လုပ်ဖို့် ကျွန်မလမ်းလျှောက်ထွက်ရမယ်။
ကမ္ဘာထဲကနေ ကျွန်မတို့ မြန်မာကို ပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့။
ကျွန်မ ကျောသားရင်သားမခွဲပေမယ့် အမှန်တရားကိုတော့ ရအောင်ခွဲရမယ်။
ပုလင်းထဲက လာတဲ့ ဥပဒေနဲ့ ပါးစပ်ထဲက အန်ကျလာတဲ့ ပုဒ်မတွေကြားမှာ
ရှင်တို့ကျမတို့ ဘယ်လောက်ညစ်ပေ နံစော် အော်ဂလီဆန်ခဲ့ရပြီဆိုတာကျွန်မကိုယ်တိုင်သိခဲ့ရတာပဲ။
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ သတင်းဆာနေသူ ရှင်တို့အတွက် သတင်းအမှန်ရဖို့
ကျွန်မမှာ ကာလီမ မယ်တော်လို လက်တွေအများကြီးမရှိသလို
ဒဿဂီရိလို ခေါင်းတွေလည်းအများကြီးမရှိတော့ ရှင်တို့နဲ့ကျွန်မအများကြီး အကြာကြီးမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့။
ကျွန်မ ကလေးတွေက မုန့်ဖိုးကောင်းကောင်းလိုချင်တယ် စမတ်ကျကျနေချင်တယ်
ကျောင်းမှာ ခုံကောင်းကောင်းနဲ့ထိုင်ချင်တယ် စာတော့မကြိုးစားချင်ကြဘူး။
ကြယ်တွေမရှိတော့လည်း ညက မကြွပြန်ဘူး
ကြယ်တွေမရှိတော့လည်း ညက မလုံခြုံပြန်ဘူး
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ လမင်းကြီးလိုပြင်ထားတယ်။
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ဒီနှစ်တွေမှာ စစ်မဖြစ်ဖို့ပြင်ထားတယ်
အခါခါသေဘူးတဲ့လူတစ်ယောက် ငရဲကိုတော့ နားလည်ရတော့မှာပေါ့။
အဲ့ဒီ အာဏာနဲ့အချိန်မရွေး ကျွန်မကိုလည်း ဖြုတ်ချချင် ဖြုတ်ချနိုင်အောင်လို့။
ဒါကြောင့်ကျွန်မ မှော်ဆရာ မဖြစ်ချင်ဘူး သမ္မတကြီးပဲဖြစ်ချင်တယ်။
( ၂ ၀ ၁ ၃ )
By: : ခရမ်းပြာ ထက်လူ
ကျွဲပါးစောင်းတီး အစိုးရ ။
ဖော်လံဖား အတိုက်အခံ ။
ဂေါက်တောက်တောက် နိုင်ငံရေးအစွယ်အပွားများ ကြားက
ဖရိုဖရဲ ပြည်သူများ ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆည်းကပ် အားကိုးခြင်သည်
တော်ပါပြီ ပြောတော့ဘူး ။ ဟီးးးးး
ပရိတ်သတ် ဆိတ်ဝင်စားအောင် ရေးရ ခေါင်းစဉ်တပ်ရတာ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာများရဲ့ သဘာဝပါ.. ဖြစ်စေချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ အပြည့်အစုံမျိုးကိုတော့ ကိုယ်ပိုင်သတင်းမီဒီယာများမှာသာ ရကောင်းပါမယ်.. လက်ရှိဈေးကွက်မှာကို အစိုးရ၊ အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းစာများနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာများရဲ့ သတင်းရေးသားပုံ၊ ခေါင်းစဉ်ပေးမှု ဘယ်လောက် ကွဲပြားနေသလဲ မြင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးမှာ ဈေးကွက်ကို ကျော်လွန်မရသလို သတင်းမှာလဲ မီဒီယာသဘော သဘာဝကို လွန်ဆန် မရစကောင်းဘူး။ စာနယ်ဇင်း သင်တန်းတွေမှာ ပြောလေ့ရှိတာ ခွေးကလူကို ကိုက်ရင် သတင်းမဟုတ်၊ လူက ခွေးကိုကိုက်မှသာ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်း အဆိုး ဘယ်လို ရှုမြင်သလဲ.. စာဖတ်သူ ဆုံးဖြတ်ပါစေ..။ ဒီလို သတင်းမျိုးဆိုတာ တပွဲထိုးနဲ့ မပြီးဘူး..။ အပြောခံရသူရဲ့ သမိုင်းကြောင်း၊ လက်ရှိ အနေအထား၊ အမူအကျင့် စတာတွေနဲ့ အများကြီး ဆိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဖြစ်ချင်ရင် မဆလ နဝတ နအဖ ခေတ်ကလို မလုပ် မရှုပ် မပြုတ် နှုတ်ပိတ် ရေငုံနေဖို့ပဲရှိတယ်… ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး ပုံစံသစ်မှာ အဲလို နေလို့ရပါ့မလား…။ တဖက်က စွပ်စွဲရင် ကိုယ့်ဖက်က ပြန်ဖြေရှင်းလို့ ရနေတာပဲဗျာ..။ ဘာကြောင့် အဲလို အသံတွေ ထွက်လာသလဲ၊ ဘယ်သူတွေ လုပ်သလဲ အဖြေရှာတတ်ရင် အရှုံးထဲက အမြတ်၊ အဆိုးထဲက အကောင်း ထွက်ပါတယ်…။ ဒါဗဲဗျာ… တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ယူနန်ပြည်နယ် မြန်တကျင့်ဒေသ အကြီးအကဲ ဘွားဒေါ်ဂျီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ… :harr:
အမေစု ဟာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် နည်းနည်း ကြီးလာခဲ့ပြီဆိုတာကို
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ သတိပြုသင့်ပါတယ်…။
အမေစု ကို ခေါင်းဆောင်စေချင်တယ်ဆိုရင်…
ဒီအချိန်က အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့သင့်ပါဘူး ခင်ဗျာ…။
ပြော တယ် ဆို ရင် တောင်
ဘာ ဆက် လုပ် မ လဲ ဆို တာ စောင့် ကြည့် ရ မှာ ပဲ က လား